Ọnọdụ Mmepe Ime Obodo nke Ihe Nje Nje Ọgwụ nje
Ihe mkpofu siri ike ewepụtara n'oge mmepụta ọgwụ nje bụ nsị nke nje, ihe mejupụtara ya bụ mycelium nke nje na-emepụta ọgwụ nje, usoro ọdịbendị na-ejighị, metabolites ewepụtara n'oge usoro ịgba ụka, ngwaahịa mbibi nke usoro ọdịbendị, na obere ego. ọgwụ nje, wdg. N'ime nsị nke nje bacteria na -agba ume, n'ihi ọdịbendị ọdịbendị na obere ọgwụ nje na ngwaahịa mbibi ha, ha nwere ike bute gburugburu ebe obibi. Ndị otu mba ụwa ewerela ya dịka otu n'ime ihe egwu ọha na eze na -emepụta ọgwụ nje. Nke a bụkwa ụwa Ihe kpatara eji akwụsị ọgwụ nje na mba ụfọdụ mepere emepe. N'ihi ọdịnaya dị elu nke ihe ndị dị ndụ na nsị nje, ọ nwere ike bute gbaa ụka nke abụọ, agba ọchịchịrị, mepụta isi na -adịghị mma, ma metụta gburugburu ebe obibi. Ya mere, ogologo oge, ndị mmadụ anọwo na-achọsi ike usoro njikwa mmetọ akụ na ụba, nke ọma na nke nwere nnukwu ikike.
obodo m bụ onye na -emepụta ma na -ebupụ APIs kachasị n'ụwa. N’afọ 2015, mmepụta nke ọgwụ nje API ruru ihe karịrị tọn 140,000, yana ihe karịrị nde tọn ọgwụ nje ọgwụ 1 ka a na -edozi kwa afọ. Otu esi ejikwa ya nke ọma na iji ihe mkpofu biomedical nwere ohere ahịa sara mbara. Enwere ike iji ngwaahịa ahụ mgbe nchekwa nchekwa gburugburu ebe obibi nke nje ahụ dị ka ihe mkpuchi ala maka imepụta akụrụngwa, nke nwere ike imezi ihe karịrị nde 5 nde ala ahịhịa saline-alkali na-adịghị mma, meziwanye usoro ala, ma bulie ihe oriri nke ihe ọkụkụ. . Teknụzụ agbakwunyere maka ọgwụgwọ biomedicine na-adịghị emerụ ahụ nwere ike bulie ojiji nke ihe ndị fọdụrụ na biomedical, nke nwere uru akụ na ụba n'ezie yana uru mmekọrịta ọha na gburugburu ogologo oge.
Njirimara nke slag nke ọgwụ nje
Ọdịnaya mmiri nke ihe fọdụrụ na nje bacteria bụ 79%~ 92%, ọdịnaya protein dị na nkụ nke ihe fọdụrụ nke nje nje nje bụ 30%~ 40%, abụba abụba dị n'ime ya bụ 10%~ 20%, na enwere ụfọdụ ihe na -agbata n'ọkwa. ngwaahịa. Ihe mgbaze anụ ahụ, calcium, magnesium, trace elements na ntakịrị ọgwụ mgbochi ọrịa fọdụrụ.
Ọgwụ nje dị iche iche nwere ụdị na usoro dị iche iche, yana ihe mejupụtara nsị nke nje ahụ dịkwa iche iche. Ọbụna otu ọgwụ nje, n'ihi usoro dị iche iche, nwere ụdị ihe dị iche iche.
Usoro nhazi ụlọ ọrụ nhazi ụlọ na nke mba ọzọ
Kemgbe afọ 1950, ejirila ọgwụ nje mee ihe dị ka ihe mgbakwunye nri iji mee nri nwere protein dị elu. obodo m etinyekwala aka na nyocha na mpaghara a kemgbe 1980. Nnyocha achọpụtala na ịgbakwunye mycelium ọgwụ nje nwere mmetụta abụọ dị mma. N'aka nke ọzọ, ọ nwere ike ịkwalite uto ọkụkọ ma mụbaa arụpụta ihe, na n'ihi na ihe mejupụtara ọgwụ ọgwụ ya nwere ike igbochi ọrịa ụfọdụ, ịgbakwunye ego kwesịrị ekwesị nwere ike inye aka Belata ọnụ ahịa nri na ọnụego anwụrụ ọkụkọ. Mana n'aka nke ọzọ, obere ọgwụ mgbochi ọrịa fọdụrụ na nsị mycelium na ngwaahịa mbibi nke nje nje nje ga -eme ka anụ ụlọ baa ọgaranya, mmadụ ga -abakwa ọgaranya n'ime mmadụ mgbe ha risịrị nri, ka ahụ mmadụ wee nwee ike iguzogide ọgwụ. N'oge mmalite ọrịa, nnukwu usoro onunu ogwu nwere ike belata ọnọdụ ahụ ma tinye nnukwu ahụike mmadụ. N'otu oge ahụ, anwụ na -ata ọtụtụ ihe fọdụrụ na mycelial ahụ, nke na -emetọ gburugburu gburugburu. Na 2002, Ministry of Agriculture, Ministry of Health, na State Drug Administration nyere ọkwa "Ndepụta katalọgụ nke amachibidoro iji nri na mmiri ọ forụ forụ maka anụmanụ", gụnyere ọgwụ nje. Dika ihe ndị chọrọ “amụma mgbochi mmetọ na njikwa teknụzụ nke ụlọ ọrụ ọgwụ” nke ministri na -ahụ maka gburugburu ebe obibi nyere na Machị 2012, a ga -ekepụta oke mkpofu ihe mkpofu dị ka ihe mkpofu dị ize ndụ, a ga -enyerịrị ya ọkụ ma ọ bụ gbanye ya n'enweghị nsogbu. Enwere ụfọdụ ihe isi ike na ụgwọ ọrụ aka ọrụ na akụ na ụba nke ụlọ ọrụ. N'okpuru ọnọdụ ndị dị ugbu a, ọnụ ahịa nhazi nwere ike karịa ụgwọ nrụpụta.
Ụlọ ọrụ ọgwụ na mba m na -eto n'ike n'ike. A na -emepụta nde kwuru nde nsị nke nje nje kwa afọ, mana enweghị usoro ọgwụgwọ dị mma ma dị irè. Ya mere, ọ dị ngwa ngwa ịchọta usoro ọgwụgwọ dị mma, anaghị emetụta gburugburu ebe obibi, yana nnukwu olu.